बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोडस्थित कृषिथोकमा पाइने सागसब्जीमा विषादिको मात्रा घट्दै गएको पाइएको छ । विषादि परीक्षण गर्ने प्राविधिकहरुले पछिल्लो समय सुधार आएको जानकारी दिएका छन् । बिर्तामोडका नगर प्रमुख धु्रव
विरवल योङहाङको प्रेस विज्ञप्ति
प्रस्तुत बिषयमा विगत केही दिन देखि विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाइन लगायतका सञ्चार माध्यमहरुबाट सडक बनाउन उत्खनन् गरिएका ढुंगा–गिटी अन्यन्त्र फेला, बाटोको बहानामा वालुवा गिटीको व्यापार ! लगायत विभिन्न शीर्षक राखि हल्दीबारी
सर्वोच्चले फेरि रोक्यो नागरिकता
काठमाडौं । जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबुआमाको सन्तानलाई वंशज आधारमा नागरिकता नदिन फेरि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता आचार्यको संयुक्त इजलासले
बुट्टावारीका ग्यारेजवाला मारमा
बिर्तामोड । झापाको व्यस्त बजार बिर्तामोडबाट ग्यारेजलाई व्यवस्थित गर्ने बिर्तामोड नगरपालिकाको योजना कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । यहाँको ग्यारेज सारेर बुट्टावारी स्थित अटोल्याण्ड पुगेका ग्यारेजवाला त्यसको मारमा परेका छन् ।
श्रीमतीलाई जलाएर हत्या गर्ने प्रयास
धनुषा । सिरहा नगरपालिका–८ की २१ वर्षीया कञ्चनदेवी मण्डल खत्वेलाई उनको श्रीमानले आगो लगाई हत्याको प्रयास गरेका छन् । नवविवाहितालाई पतिले मट्टीतेल छर्केर जलाएको घटना लगत्तै सिरहामा फेरि यो अर्को
सुरुङामा खाद्य सामग्री अनुगमन
सिएम शर्मा कनकाई । कनकाई नगरपालिकाको वडा नं. १ , ३ र ७ मा वडा स्तरीय खाद्य स्वच्छता समूह गठन भएको भोलिपल्टै वडा नं. ३ सुरुङ्गा बजारमा खाद्य सामग्री अनुगमन
श्रीअन्तुमा होमस्टेको नाममा होटलस्टे
श्रीअन्तु । पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा विकास भइरहेको इलामको श्रीअन्तुमा पर्यटकले असली होमस्टेमा बस्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । सुर्य उदाएको हेर्नलाई श्रीअन्तु पुग्ने अधिकांश पर्यटक पहिलो दिन अन्तुकै होमस्टे बस्न
सवारी साधनमा जातीयता
विर्तामोड । केहि वर्ष अगाडिसम्म जातीयताका लागि सडकमा आन्दोलन चल्ने गर्थे । संविधान जारी भएपछि त्यस प्रकारका आन्दोलन भएको पाइदैन । तर, पछिल्लो समय सवारी साधनमा जातीयता झल्किन थालेको छ
निर्वाध चल्दैछन् ‘ओभर लोड’का सवारी
विर्तामोड । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सडकको क्षमताभन्दा बढि लोड गरिएका मालवाहक सवारी गुढ्ने गरेका छन् । जसका कारण सडक दिनहुँ कमजोर बन्दै गएको छ । राजमार्गको भार क्षमता १० टन भएपनि